तलब होस् त यी सिइओहरुको जस्तो
एउटा सिइओको वार्षिक आम्दानी कतिसम्म हुनसक्ला रु हरेक देशका आफ्ना आफ्नै नियम तथा कानुनहरु रहेका छन् । यस्ता कम्प्लेक्स संरचनाका कारण उनीहरुको आम्दानी हिसाब यति हो भन्ने छैन ।
यस्ता छन् जापानका विद्यालयमा हुने अजबगजबका नियमहरु
बालबालिकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमध्ये विद्यालय जानु पनि एक हो । विहान चाँडै उठ्ने, विद्यालय जाने र गृहकार्य गर्ने जस्ता जिम्मेवारी एक विद्यार्थीको हुन्छ ।
मृत्युको पहाड !
एजेन्सी । यसलाई मृत्युको पहाड पनि भनिन्छ । बोलिभियाको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा केरो रिको माउन्टेन मानिसलाई खाने पहाडको नामले परिचीत रहेको छ ।
ऋण तिर्न नसकेपछि यस्तो उपाय लगाइन् यी युवतीले
शाकाहारी हुनुका अजबगजबका १० फाइदा
शाकाहारी भोजनमा रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ । मासुमा पाइने तत्वका कारण मासु चाँडै पच्दैन । जबकि शाकाहारी खाना चाँडै पच्छ ।
जब मेस्सीबारे यस्तो हल्ला फिजाइन् यी युवतीले
फुटबल स्टार लियोनल मेस्सी फुटबल मैदानमा सर्वोत्कृट खेलाडीको रुपमा परिचित छन् । विश्वभर उनका करोडौ फ्यान छन् ।
गर्भमा छोरा छ कि छोरी ? यसरी पत्ता लगाउनुहोस्...
एजेन्सी । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया तथा ड्युक युनिभर्सिटीले गरेको अध्ययनले तपाईको गर्भमा रहेका शिशु छोरा हो कि